Ye-Mon's Personal Pages: August 2009
Once uponatime inauniversity in Burma
A friend recommended me this YouTube clip of Prof. Kyaw Thet's excerpt from CBS Edward Murrow's "See It Now" program on "Burma, Buddhism, and Neutrality" and I would like to share it with you again. This short clip tells us so much.
The first line began as follows:
"... Burma was the third nation in the history of the British empire to win its independence. The first two being the American colonies and the Republic of Iraq ... "
Thanks to lynaung who posted it on YouTube.
4 comments Labels: burma, education, forget-me-not, video
Early Worm and Early Bird
၂၀၊ ၈၊ ၂၀၀၉
စကားပုံရှိတယ် “စောစောထတဲ့ငှက်ဟာ အစာ (ပိုးကောင်လေးများ) ရလွယ်ပါတယ်” တဲ့။ ဒါဆိုရင် စောစောထတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေကျတော့ရော။ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
ဒီနေ့ စောစောထမိတဲ့ ပိုးကောင်လေး တစ်ကောင်အကြောင်း ပြောမလို့ပါ။
အိပ်ရာကနိုးတော့ အခန်းထဲမှာ မှောင်နေတုန်း။ ပြူတင်းပေါက် ဘလိုင်း ကြားထဲကနေ နံနက်ခင်း အလင်းရောင်က မသိမသာ တိုးဝင်လို့လာနေသည်။ ပျင်းကြော တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ဆန့်ပြီး နာရီကြည့်တော့ ၅း၄၅။ အင်း ဒီအပတ် နွေရာသီသင်တန်းကတော့ မြန်မြန်ပြီးပါမှပဲ။ မဟုတ်ရင် နေ့တိုင်း ကျောင်းစောစောသွားနေရတာ တယ်မနိပ်လှဘူး။ ဒီနွေရာသီသင်တန်းက ပုံမှန်သင်တန်းမဟုတ်။ ဂျွန်စနိုးအင့် (ဂျွန်စနိုး ဆိုတဲ့ အန်ဂျီအို) ကနေ ကပ်စတန်မိုက်ဇ် (customize) လုပ်ပြီး သင်ခိုင်းတဲ့ အတန်းဆိုတော့ ပြင်ဆင်စရာတွေက ပိုများသည်။
ပုံမှန်ဆိုရင် အတန်းတက်စရာ မလိုတော့တဲ့ ကျမ်းပြုပါရဂူ ကျောင်းသားများ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းကို သွားချင်တဲ့ အချိန်မှသွား၊ တချို့နေ့များဆို အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုပြီး ကိုရီးယား အခန်းဆက်ကားတွေ ထိုင်ကြည့်နဲ့ ဟန်ကိုကျနေတာပဲ။
အရေးထဲ မနေ့က ညစာကို လျော့စားထားမိတော့ ဗိုက်ထဲက တကျုပ်ကျုပ်မြည်ကာ ဆာလို့လာသည်။ သူငယ်ချင်းကြီး ပြုတ်ပေးထားတဲ့ ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းကြမ်းကျန်တာလေး ကြော်စားရင် ကောင်းမလား။ တွေးရင်းနဲ့ သွားရည်ယိုလာသည်။ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒီနေ့ ကျူတိုရီရယ်မှာ ပေးရမယ့် မှတ်စုတွေလည်း ပရင့်ထုတ်ရဦးမယ် ဆိုတော့ နောက်ကျလို့မဖြစ်။ ကျောင်းကို စောစောသွားပြီး ကျောင်းရောက်မှ စားနေကျ ဆေးရုံကင်တင်းမှာ မနက်စာစားတော့မယ်။ ဟိုက် .. ပိုက်ဆံတောင် မရှိတော့ဘူး။ ကင်တင်းက ငွေသားပဲ လက်ခံတယ် အကြွေးကဒ်မရ။ ဒါဆိုရင် သွားနေကျ ကျောင်းကားဂိတ်ကို သွားမစီးပဲ နည်းနည်းပိုဝေးပေမယ့် ငွေထုတ်စက်နဲ့ လမ်းသင့်တဲ့ ကျောင်းကားဂိတ်ကိုပဲ သွားစီးတော့မယ်။
စိတ်ထဲမှာ ကမန်းကတန်းဆွဲလိုက်တဲ့ ကိုယ့်အစီအစဉ်ကိုကိုယ် ကျေနပ်သွားပြီး ရေအမြန်ချိုးကာ အိမ်ကနေ ကျောင်းကားဂိတ်ကို ထွက်လာပါတယ်။ ဘော်လ်တီးမိုး နွေရာသီမနက်ခင်းက နေ့ခင်းလို ပူလောင်မနေပဲ ခပ်အေးအေးနှင့်မို့ သီချင်းလေး ညည်းရင်း လျှောက်လာလိုက်တာ ခြေလှမ်း ၅၀ တောင် မပြည့်သေး နောက်ကနေ ခပ်သွက်သွက် ပြေးလာတဲ့ ခြေသံကြားပါတော့တယ်။ မနက်ခင်း ရွရွပြေးတဲ့ လူဖြစ်မှာပဲ။ ဒီနားမှာ အားကစား လိုက်စားတဲ့ လူတွေကများသား မဟုတ်လား။
ခဏကြာတော့ ပြေးနေတဲ့ ခြေသံပျောက်သွားပြီး ဘယ်ဖက် ဘေးနားမှာ ပုဂ္ဂိုလ်လေးတစ်ယောက် ဖြုတ်ကနဲ ပေါ်လာတယ်။ ဘတ်စကက်ဘော ကစားတဲ့ အ၀တ်အစားဝတ်ထားတဲ့ အားကစားသမား ကိုယ်လုံးနဲ့ အသက် ၂၀ ကျော်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ပါးစပ်ကလည်း ဘာတွေမှန်းမသိ တတွတ်တွတ် ပြောနေတယ်။ အရင် အတွေ့အကြုံတွေအရ ဆိုရင်တော့ ငွေအကြွေပါလား ဘာညာပြောတာဖြစ်မှာ။ ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးက နဲနဲ ထူးခြားနေပုံရတယ်။ သူက ဘေးချင်းယှဉ် ရပ်နေရာကနေ သူ့ဘယ်ဖက်လက်ကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကနေ နဲနဲဆွဲထုတ်ပြလိုက်တော့ … လားလား … ပစ်စတိုသေနတ် ပါလား။
ဘာမှ မငြင်းပဲ ဖုန်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အခုအချိန်အထိ နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း မြန်မလာ၊ ကြောက်စိတ်လည်း ၀င်မလာပဲ အံ့သြလောက်အောင် စိတ်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးက မျက်နှာချင်းဆိုင် နေရာကို ရောက်လာပြီး ညာလက်နဲ့ ဖုန်းကို လှမ်းယူလိုက်သည်။ ဘယ်လက်ကတော့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက သေနတ်ကို ကိုင်ထားတုန်း။ မသိတဲ့ လူတွေများ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကြည့်နေရင် မိတ်ဆွေနှစ်ယောက် စကားပြောနေတယ်လို့ ထင်ရလိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်လေး နိုကီယာ ၆၀၃၀ ဖုန်းကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ကြည့်ပြီး စိတ်ညစ်သွားပုံနဲ့
(စကားချပ်။ ။ နိုကီယာ ၆၀၃၀ ဖုန်းက ဒီမှာ အပေါဆုံးဖုန်းဆိုတော့ ပြန်ရောင်းစားလို့ မရပါ။)
“ပိုက်ဆံအိတ်ပေး” လို့ တောင်းလာပြန်တယ်။
ဒါနဲ့ အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်တော့ တယ်လီဖုန်းကို ပြန်ပေးပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကို လှမ်းယူသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်လို့သာ ပြောရသည် ငွေက တစ်ပြားမှ မပါ။ (အခုမှ ငွေထုတ်စက်ကို သွားပြီး ငွေထုတ်မလို့ ဆိုတာတော့ ပြောလို့မဖြစ်) အကြွေးကဒ်နှင့် ဘာဘာညာညာ ကဒ်ပြားများကို ထည့်သည့် ဓါတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ်လိုမျိုး အသေးစားလေးဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ် လှမ်းပေးလိုက်ရင်းနဲ့ စကား တစ်ခွန်းတော့ ပြောလိုက်မိသည်။
“ဆောရီးပဲဗျာ ကျွန်တော့မှာ ငွေမရှိဘူး။ ဘိုင်ကျနေတယ်”
ပုဂ္ဂိုလ်လေး ပိုက်ဆံအိတ်ကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး အတော် စိတ်ညစ်သွားပုံရသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပါ ပြန်ပေးပြီး
“ခင်ဗျား ရဲကို ဖုန်းလျှောက်ဆက်မနေနဲ့” ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို လာရာဖက်ကို ပြန်ပြေးသွားပါတော့တယ်။
စောစောထမိတဲ့ ပိုးကောင် စောစောထတဲ့ ငှက်အစာ ဖြစ်တော့မလို့ဗျ။ သတိထားကြနော။
8 comments Labels: autobio, burmese, story